सिरानी मिलाएर लगाएमा पनि निद्रा मज्जाले लाग्छ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com सिरानी मिलाएर लगाएमा पनि निद्रा मज्जाले लाग्छ - खबर प्रवाह
निद्रा कुनै पनि प्राणीको थकान दूर गर्ने एक मात्र भरपर्दाे विकल्प हो । शरीरलाई विश्रामको आवश्यकता भएअनुसार दिन भरको भागदौडबाट शरीरमा आराम पुर्‍याउँछ ।
तसर्थ हरेक मानिसलाई आराम गर्न सुत्न आवश्यक छ । तर सुत्न उपयुक्त दिशामा सिरानी हुन पर्छ ।
यदि मानिस सही दिशामा सिरानी लगाएर सुतेन भने वायुमण्डलमा भएका ऊर्जा नकारात्मक किरण शरीरमा प्रवेश हुनसक्छ । तसर्थ गलत दिशामा सिरानी हुँदा जीवनमा नकारत्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
नकारात्मक ऊर्जा कम गर्न वास्तुको विशेष महत्व हुने भएकाले वास्तुशास्त्रअनुसार सिरानीको दिशा बनाउनु पर्दछ ।
सुत्न सबैभन्दा उत्तम दिशा पूर्व हो । पश्चिम र दक्षिण दिशा पनि राम्रो मानिन्छ । तर पूर्वको तुलनामा यो कम उत्तम हुन्छ । हुन त उत्तर पूर्व पनि सुत्न सकिन्छ तर उत्तर दिशामा भने सिरानी पार्नु हुदैन ।
घरमूलीको शयन कक्ष घरको दक्षिण वा पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ । यस्तोमा सुतेको मानिसलाई पूर्णशान्ति पूर्वक गहिरो निद्रा लाग्दछ।
यसका साथै बुद्धिको राम्रो विकास हुन्छ र साथै घरमा पनि सुखसमृद्धि एवं सम्पन्नता हुने गर्दछ । यदि दक्षिण दिशामा सिरानी राख्न सम्भव नभए पश्चिमतर्फ पनि राख्न सकिन्छ। तर अन्य दिशामा पलङ वा सिरानी भए बुद्धि सञ्चालन ठीकसँग नहुने मान्यता छ ।
हानिकारक क्याल्सियम कार्वाइड रसायनको प्रयोग गरिएका फलफूल कसरी चिन्ने ?
दैनिक लिपिस्टिकको प्रयोगले ल्याउँछ यस्तो खतरा
चाणक्य नीतिदर्णपको अध्याय ९ को चौथो श्लोकमा चाणक्यले भनेका छन् । सर्वौषधीनाममृतं प्रधानं सर्वेषु सौख्येष्वशनं प्रधानम् । सर्वेन्द्रयाणं नयनं प्रधानम् सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम् ।। अर्थात सवै औषधिहरुमा गुर्जो मुख्य छ । सबै सुखहरुमा भोजन मुख्य छ । सबै ईन्द्रियहरुमा आँखा श्रेष्ठ छ । सबै शरीरमा शिर(टाउको) प्रधान छ । विज्ञापन हाम्रो गाँउ घरमा पाईने […]
घर आगनमा आफै उम्रने तथा हिन्दुहरुले नित्य पूजा गर्ने तुलसी बहु उपयोगी औषधीय गुणयुक्त वनस्पती हो । यसको प्रयोगले कैंयौ प्रकारका जटिल रोगसहित साधारण स्वास्थ्य समस्या समेत निको हुन्छ । १. तुलसीमा कीटनाशक शक्तिहुने भएकाले तुलसीको पातको लेदो बनाई घाउ, सुन्निएको तथा दुखेको ठाउँमा लेपको रूपमा लगाउँदा लाभ मिल्छ । विज्ञापन २. ५ देखि १० […]
एजेन्सी – ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यदी बिहानको सुरुवात सही भएमा पुरै दिन राम्रो हुने गर्दछ। तर ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरिएका केही गलत कुरा बिहान गर्यो भने पूरै दिन खराब हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई कुन कुन चिज देख्नु बिहानको समयमा अशुभ हुने गर्दछ भन्ने कुराबा बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जुन कुरा बिहान हेर्नुभयो भने दिनभर अशुभ मानिने […]
काठमाडौँ। हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरूले निन्द्राबाट उठ्दा आफूले देखेका सपनाहरू बिर्सिने गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सपनामा देखेका कुराहरूले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनाको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको […]
पारिजातको फूल सुन्दरता र सजावटमा मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी सिद्ध भएको छ । अंग्रेजीमा नाइट जस्मिन् भनिने पारिजात फूलका विभिन्न फाइदाहरु रहेका छन् । यहाँ हामीले केही फाइदाहरु उल्लेख गरेका छौं । – पारिजात फूलको विशेष महत्व छ । यसले मुख्य गरी तपाईंको जीवनमा तनाव हटाउन मद्धत गर्दछ । यतिमात्र होइन त्यसको वास्नाले […]
मानिसको उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा समेत कमी आउने गर्दछ । यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर आजकल कतिपय युवा उमेरकै मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर हुने गरको छ । यसको पछाडि भने धेरै कारणहरु रहने गरेका छन् । आजकल मुख्यतयाः दैनिक जीवनयापनका क्रममा मानिसबाट गरिने गलत बानिले मानिसको मष्तिकलाई कमजोर बनाउने गर्छ । जसको कारण धेरै मानिस छिट्टै […]